Shiinaha iibkiisa cabirkiisu waa nolol qurux badan oo naxaas ah Mermaid tirooyinka isha leh warshada Holding Shell iyo soosaarayaasha | Shaqooyinka Atisan
Naqshadaha Birta ahama
Taallo dhagax marmar ah oo biyo qurxin ballaaran ...
Qurxinta bannaanka naxaasta ah ee isha biyaha ...
Bannaanka bannaanka farshaxanka jardiinada naxaasta ah ...
Qiyaasta nolosha nolosha Hot tirooyinka naxaasta ah ee quruxda badan ee isha leh 'Holding Shell'
Cabbirka: Cabbirka la habeeyay
Waxyaabaha: Maarta Nadiif ah
Bixinta: T / T, Deynta, Western Union, gram Money, PayPal
TAG: Isha Naqshadeynta Maarta Maarta ah
Taageerada Farsamada ee Internetka, Rakibaadda Goobta
Awoodda Xalka Mashruuca:
Naqshadeynta qaabka 3D, xalka guud ee mashaariicda
naxaas Mermaid Isha
Naxaas, naxaas, naxaas
Midab gaar ah
Dhoofinta Qoryaha Caadiga ah ee Dhoofinta
La safeeyay + Honed
Qiyaasta nolosha iibka ah ee kuleylka ah ee naxaasta leh ee Maarta ah ee leh 'Holding Shell'
Nawaaxiga Maarta Naxaaska Nadiifinta
Sawirka tayo sare leh ee naxaasta ah waxaa loo habeeyay beerta macmiilkayaga Mareykanka. Wuxuu qorsheynayaa inuu farshaxankan dhigo beerta dambe oo wuxuu ku xirnaan karaa isha biyaha sida il yar. Labada meermeer ayaa midba midka kale ku hareeraysan yahay si hufan oo soo jiidasho leh.
Faa'iidooyinka Naqshadaynta Maarta
Farshaxannada naxaasta ah ee la tuuray waxay adeegsadaan wasakhda heerkulka sare ee u adkaysata sida wasakhda balastarrada diidan ama wasakhda ciidda, kuwaas oo guud ahaan ah lakabyo gudaha iyo dibedda ah. Biyaha naxaasta ah ayaa lagu shubay caaryada ka soo ifaysa iftiinka cirka oo la qaboojiyey si ay u noqdaan.
Sababtoo ah astaamaha farshaxanimada naxaasta ah, waxay leedahay astaamo muddo dheer soconaya. Tilmaanta naxaasta lafteeda ayaa leh dareen culus, maaddaama maaddada farshaxanimada ee shaxanka ay si fiican uga tarjumeyso dabeecadda astaamaha. Intaa waxaa sii dheer, farshaxanno naxaas ah way fududahay in la ilaaliyo oo waqti kama lumin doonaan.
Codsiga Naqshadaynta Maarta
Iyada oo la hagaajinayo heerarka nolosha, dalabkeenna xardhashada naxaasta ayaa sii kordheysa, iyo muddada nololeed ee xardho naxaasku waa isbarbardhig. Muddo dheer oo fudud in la abaabulo, inta badan waxay door muhiim ah ka ciyaari kartaa farsamooyinka qaarkood. Hadday ku taal bartamaha magaalada ama beerta dambe, farshaxanka naxaasta ah ee naxaasta ahi waa xulasho wanaagsan.
Sida warshad farshaxan oo sannado badan oo waayo-aragnimo ah, waxaan leenahay adeeg aad u fiican iyo sayid farshaxanno xirfadlayaal ah. Dhammaan alaabooyinka ku yaal boggayaga ayaa la habeyn karaa, iyada oo aan loo eegin cabirkaaga ama shuruudaha midabkaaga, waan la kulmi karnaa.
Sharaxaad: Qiyaasta nolosha iibka ah ee kuleylka ah ee naxaasta leh ee Maarta ah ee leh 'Holding Shell'
Waxyaabaha ceeriin: Naxaas / Naxaas / Naxaas
Baaxadda Range: Dhererka Caadiga ah ee 1.3M illaa 1.8M ama La qaabeeyey
Midabka Dusha sare: Midabka asalka ah / dhalaalaya dahabka / cagaarka / madow
Ka walaacsan: qurxin
Hawlaha: Tuur oo leh Nadiifinta Dusha sare
Cimri dherer: ansax ah oo leh heerkulka -20 ℃ ilaa 40 ℃. Ka durugsanaanta dhagaxa dhagax, badanaa roob da'aa, meel baraf badan.
Shaqaynta: Hoolka qoyska / guriga dhexdiisa / guri keniisad ah / fane / dhul baaxad / mawduuc iwm
Bixinta: Isticmaal Hubinta Ganacsiga si aad uhesho Fadlan Dheeraad ah! Ama by L / C, T / T
Hore: tv-ga beerta casriga ahi wuxuu la taagan yahay marmar faransiis dabka lagu shido mantels ku wareegsan
Xiga: Hot iibinta qurxinta qurxinta alaabada beerta dhagax il biyo ah oo keruub ah
Naag qurux badan oo farshaxan qurux badan oo bannaanka ...
Bannaanka qurxinta bannaanka fou biyo mini ...
Qurxinta Garden derbiga farshaxan marmar cad f ...
gacanta Shiinaha gacmeed lagu xardhay foun biyaha ...
Dhagax marmar ah oo lagu dabaasho biyo balaaran ...
Dhagax dabiici ah Shiinaha gabar gabar fung shu shu ...